Ukukhuphela simahla kwiiTekisi ezi-1.000 zeJapan eziBhalwe kakuhle Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkcubeko yaseJapan ibikhona uyakwazi ukukhuthaza amawaka amagcisa ayo yonke iminyaka ngeentsomi zakhe zentsomi okanye indlela ekhethekileyo yokuqonda umzekeliso, osikhokelele kwimisebenzi yobugcisa ngabazobi abaziwayo baseJapan. Ukujikeleza apha sizamile ukuzisa ezinye amaxesha ngamaxesha.
Ibali elityebileyo elibonakalayo ngoku inokukhutshelwa kwiSmithsonian, ekhuphe ngaphezulu kwe-1.100 yemibhalo yaseJapan evela kwiingqokelela zabaqokeleli babini abakhulu. Unazo ezifumaneka simahla kwinethiwekhi, ke masazi kancinci ngazo.
yakhe UCharles Lang Freer noRobert O. Muller, Abaqokeleli ukuba le mibhalo yembali ibonwayo sele iye kwidijithali. Indawo yangaphambili sisikhululo sikaloliwe kwaye esokugqibela ngumthengisi wobugcisa. U-Lang waqala ngengqokelela yakhe xa wayethatha umhlala-phantsi ngo-1899, ngenxa yobuhlobo bakhe nomzobi uJames McNeil Whistler kunye nomfundi wezobugcisa owaziwa njengo-Ernest Fenollosa. Ekuthandeni kwakhe ubugcisa baseAsia, wamkhokelela ekubeni anikele ngengqokelela yakhe yabucala kurhulumente.
Muller naye wazisa ukuthanda kwakhe ubugcisa baseJapan emva kokufumanisa ukuprintwa kweebloko eNew York ngeminyaka yoo 30. Waqala ke waqokelela ingqokelela enkulu yobugcisa base Japan de kwasekufeni kwakhe ngo 2003. Wanikela ngama 4.000 yaloo misebenzi, kunye namaxwebhu amaninzi kwi Smithsonian.
Enkosi ngokuthanda kwala madoda mabini, namhlanje sinokufikelela kwi Ukuphuhliswa koncwadi lwaseJapan ukusukela kwixesha le-Edo neMeji, ukusukela ngo-1600 ukuya ku-1912. Ngaphezulu kwe-1.000 67 imisebenzi efakwe ekhompyutheni esuka kwaSimahla kunye nenye engama-XNUMX esuka kugcino lukaMuller iyonke.
Iwebhu iyafumaneka kweli qhagamshelo, kwaye wena izakuvumela ukufikelela kugcino lwembali ngendlela yemifanekiso enokusetyenziswa simahla. Ixesha elihle lokubonisa ihempe entle okanye umqamelo kwigumbi lakho lokuhlala ngokusebenzisa amaqonga aziwa ngabo bonke abanjengoEtsy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imibhalo engaphezu kwe-1.000 XNUMX enemifanekiso emihle yaseJapan ngoku iyafumaneka kwi-Intanethi